Asa any ivelany | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: Asa any ivelany
Ahoana no fomba ahazoako miasa amin'ny Firenena Mikambana
Ahoana no ahafahanao miasa ao amin'ny Firenena Mikambana? Manontany an'i Putin na Medvedev ianao. manapa-kevitra aloha hoe iza - ny sakaizan'ny sakaiza iray miasa ao amin'ny mpandika teny - mahay fiteny vahiny 5 na 6, nefa manana ...
Inona no asan'ny mpikaroka?
Karazan'asa manao ahoana no ataon'ny mpandrefitra ny harena ankibon'ny tany etsy ambony izay efa nofaritanao tamin'ny antsipiriany ny zava-drehetra. Holazaiko amin'ny fiteny matihanina tsotra: ny mpandrefy dia mpandrefy ambanin'ny tany, toy ny sapper izy, manao hadisoana lehibe indray mandeha, avy eo afaka miala ...
Salama! Azon'ny olona manolotra toerana any Etazonia ve ny fitadiavana asa any Etazonia, na ny fomba hitadiavana mpampiasa?
Salama! Misy afaka manoro ny tranokala amerikana mitady asa any Etazonia ve, sa ahoana no fomba hahitanao mpampiasa? ary tsy manana olana amin'ny fahazoan-dàlana honenana amerikana ianao na manan-danja be ianao ...
Ny karaman'ny electrician. Iza no hilaza ny elektrely mpanolotsaina ao Moskoa sy St. Petersburg?
Karama elektrika. Iza no afaka milaza aminao hoe inona ny karaman'ny elektrisianina any Moskoa sy St. Petersburg? Aleo mamoaka IP dia miasa ianao. Hivoaka imbetsaka kokoa. Ao Kazan, herinaratra ho ahy mifamatotra amin'ny ...
Miasa amin'ny toeram-pitrandrahana sy harena ankibon'ny tany. prom-ti ao Aostralia cannington-ag
Miasa amin'ny harena ankibon'ny tany sy ny harena ankibon'ny tany prom-ty ao AUSTRALIA cannington-ag Misy zavatra valiny tsara nomen'izy rehetra, nilaza tamiko koa izy ireo fa ho avy aho, hafahafa be daholo izany rehetra izany azafady andefaso aho ho ...
iza no niasa tany Norvezy tamin'ny sehatra solika sy gazy? Mendrika ve ny mandeha any, sa tsy izany? lazao amiko!
efa nisy niasa tamin'ny sehatra solika sy lasantsy tany norway? mendrika ny fandehanana any ve sa fisolokiana ??? teneno aho! Misy ny asa toy izany. Tena tsara ny karama! Fa ianao sakaizako tsy ho tonga any! Ho an'ny: 1) ...
Lazao ahy ny fomba ahafahanao mahazo asa amin'ny sehatra solika ao Rosia, raha avy any Okraina
Lazao amiko ny fomba ahafahanao mahazo asa amin'ny sehatra solika any Russia, raha avy any Okraina ianao, eny, na dia avy any Chine aza, fifanarahana iray any Kharkov sy ho avy, raha mahazaka izany toetrandro izany ianao. Mandrosoa ...
Iza no nandeha niasa tany Finlandy mba hanangom-bozaka ??
Iza no nandeha niasa tany Failandy naka frezy ??? Manomboka amin'ny faran'ny volana Jona-voalohan'ny volana Jolay ny vanim-potoana (miankina amin'ny toetr'andro) ary mifarana amin'ny andro farany amin'ny volana Jolay. Malaza amin'ny tanimboliny ...
Ahoana ny fandehanana any Amerika mba hiaina sy hiasa?
ahoana ny fandehanana any Amerika hiaina sy hiasa? aloha, mahazoa karatra maintso any Russia ary mahazo visa! Raha efa manana karatra maintso ianao dia afaka miaina, miasa, ...
Lazao ahy ny fomba hahatongavana any amin'ireo orinasam-barotra volamena ao amin'ny Federasiona Rosiana mba hiasa. Nefa mba jereo fotsiny ny isa sy ny adiresy na ny tranokala.
Lazao amiko ny fomba hahatongavana any amin'ireo toeram-pitrandrahana volamena an'ny Federasiona Rosiana hiasa. Nefa isa sy adiresy na tranokala voamarina ihany no avy any Okraina. Mila antontan-taratasy marobe ianao, ao anatin'izany ny fahazoan-dàlana hiasa ...
Iza no hilaza ny tena toeran'ny asa any Kanada?
iza no afaka milaza aminao ny tena toerana misy ny asa any Canada? Manome fanampiana izahay amin'ny fitadiavana asa any amin'ny fianakaviana kanadiana ho an'ireo vehivavy manana fanabeazana ara-pedagojika na traikefa amin'ny fiasana amin'ny fianakaviana toy ny mpitaiza sy mpiambina. Tamin'ny voalohany ...
Azo atao ve ny manompo amin'ny fifanarahana ao Syria?
Azo atao ve ny manompo amin'ny fifanarahana any syria? Te-ho any aho ... namniki dia tsy mpiady ary tsy manan-jo hanana gadra ady. Midika izany fa mety hamonjy fanenjehana ny namnik ...
Manoro hevitra hoe aiza no mankany ivelany any ivelany? Aiza ny karama mihoatra noho ny rehetra?
Manoro hevitra, aiza no tsara kokoa ny miasa any ivelany? Aiza ny karama bebe kokoa noho ny any an-kafa? Tsy mitranga izany ... Ny fahazoan-dàlana hiasa any Etazonia dia mitentina telo ka hatramin'ny dimy arivo dolara, any Angletera - ...
81 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,899.